Cilmaaniyadda oo kor loo qaado: ayay uu tahay waajibkiisa hore? – Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD)
Home › Forums › Madasha Dhalinyarada › Cilmaaniyadda oo kor loo qaado: ayay uu tahay waajibkiisa hore?
March 22, 2022 at 9:26 am #3627 Reply
Qoraa Ourji Biso*
In cilmaaniyaddu ay hormood ka noqoto runtii waa mabda’a ugu muhiimsan ee doorasho la’aan ah si loo dammaanad qaado ixtiraamka xorriyadda diinta iyo xuquuqaha kale ee aadanaha. Dawlad aay kala saaridda diinta iyo dawladba aay ka jirin, gaar ahaan dal diimo badan leh sida Itoobiya oo kale, ma dhici karto in la hiigsado sinnaanta iyadoo la leeyahay diin loo asteeyey ama lagu soocay inay tahay diin qaran ama dawladnimo. Horay ayaa loo sameeyay oo qaran ahaan inagu fashilantay. Dhammaan fikradda maqaalka Mihret, ee cinwaankeedu yahay “Difaaca cilmaaniyadda” ma jiraan wax ka laga tagay; dhamaan dooda iyo garnaqsigu waxa ay tilmaamay sababta iyo sida cilmaaniyaddu tahay. Waxay guud ahaan si fiican u sharraxday baahida loo qabo calmaaniyadda. Marka uu sidaas samaynayo, qoraagu waxa uu diiradda saaray ka fogaanshaha machadyada diinta ku lug lahaanshaha arrimaha dawladda. Hab-fekerkan waxa laga yaabaa inay ka dhalatay cabsi ay ugu wacan tahay ku lug lahaanshaha rasmiga ah ee taariikhda muddada dheer ee diinta ku lahayd arrimaha dawladda iyo xaaladda degdegga ah ee dhawaanahan ee xisbiyada siyaasadeed oo u muuqda inay leeyihiin ajande diimeed.
Cilmaaniyadu: waddo kale
Si kastaba ha ahaatee, aniga oo weli xaqiijinaya sababta iyo sharraxaadaha lagu difaacayo cilmaaniyadda, waxaan si weyn u aaminsanahay in mabda’a si habboon loo ilaaliyo, labada machadoodba waxay u baahan yihiin inay ka fogaadaan faragelinta arrimaha dhexdooda ah. Mid la mid ah ama ka weyn waa in diiradda la saaraa xaddidaadda saamaynta dawladeed ee machadaha diinta iyo caqiidada iyada oo xoogga la saarayo in la xaddido ku lug lahaanshaha diinta ee arrimaha dawladda. Ha ahaato dawlad leh “diin dawladeed” ama dawlad gebi ahaanba mamnuucday caqiidada diinta iyo ku dhaqankooda; Cilmaaniyaddu wali waxay ku jirtaa khatar weyn. Marka dawladda iyo diintu sameeyaan urur ay ku midoobaan taasi waa caqabad cad oo caqabad ku ah xuquuqda sinnaanta, xorriyadda diinta, iyo fikirka labadaba kuwa raacaya diinta dawladda iyo kuwa raacaya caqiidada kale ee diinta ama aan midna lahayn.
Tan iyo markii fikradda cilmaaninimada ee maanta lagu dhaqmo lafteedu ay u timid inay ka fogaato saameynta Kaniisadda Katooliga waxaa la filayaa in diiradda mabda’a cilmaanigu ay aad u xoogga saarto xaddidaadda ku lug lahaanshaha diinta ee arrimaha dawladda. Waxaa aad loogu mahad naqayaa in mabda’aas uu dunida iyo dalkeena u horseeday dawlado cilmaani ah oo aad ugu mahad naqa kala duwanaanshaha diinta iyo caqiidada. Mabda’a cilmaaniyadu haddii si sax ah loogu dhaqmo waxay saameyn weyn ku leedahay dammaanad qaadka ixtiraamka qaybo badan oo xuquuqal insaanka oo ay ku jirto ilaalinta mabda’a sinnaanta oo ah mabda’a aasaasiga ah ee ixtiraamka dhammaan xuquuqaha kale ee aadanaha. Halka ay dawlad iyo diinba u dhisan yihiin laba qaybood oo kala duwan, waxay dammaanad qaada xorriyadda diinta iyo ilaalinta sinnaanta ee sharciga hortiisa.
Itoobiya iyo ku lug lahaanshaha dawladda ee arrimaha diinta
Sida kor ku xusan, mabda’a cilmaanigu wuxuu si fiican u shaqeeyaa marka xaddidaadda ku lug lahaanshaha ay tahay labada dhinac, tusaale ahaan, ku lug lahaanshaha dawladda ee arrimaha diinta iyo ku lug lahaanshaha machadaha diinta ee arrimaha dawladda. Runtii, hadda ma jirto, oo diintu si rasmi ah waxa ay ka baydhay dowladda (maadaama aysan jirin diin dawladeed) dhamaadki nidaamki boqortooyada inkasta oo saameyntii raagtay ay weli socoto. Tani waxay sidoo kale tahay sababta ilaa xad maqaalka aan ka jawaabayo. Hase yeeshee, burburkii taliskii nidaamki boqortooyada ka dib, dawladihii ka danbeeyay waxay u muuqdeen kuwo xornimo ah oo sinnaan diimaha oo dhan si gaar ah ugu sima laakiin dhammaantood waxay lahaayeen cillado. Dawladii hantiwadaaga waxay meesha ka saartay fikradii diin dawladeed waxayna isku dayday in ay umada oo dhan ka dhigto cawaan, mabda’a dawladeed ee diintu waxay ahayd cadaawad, run ahaantiina diinta oo dhami way isla simannayen mana jirin dawlad u xaglinaysa diin gar ah. Burburkii ka dib, dastuurkii EPRDF wuxuu qiray cilmaaniyad, ma jirin diin dawladeed, cadowtinimo loo qabo caqiidada diinta iyo ku dhaqankeeda iyo meel bannaan oo u furan machadaha diinta iyo xertooda ayaa u muuqaty inay soo shaac baxday. In kasta oo gacmaha dadban ee kooxo kala duwan ee machadaha diinta lagu sheego inay ka shaqaynayaan arrimaha dawladda, haddana waxa la sameeyay xuduud cad, halka machadaha diintuna ay sidoo kale ka hadlayaan dawladda wax yalaha an muuqan haddana si xooggan ba loo dareemay gacmo wiiqi machadaha diinta.
Xataa haddii xuduudda labada dhinac laga soo xadgudbay, sinnaanta diimaha waxay uu ahayd xilli wanaagsan. Mas’uuliyadda weyni waxay saaran tahay dawladda inay si habboon u dabaqdo cilmaaniyadda oo ay marka hore gacanteeda ka saarto arrimaha diinta. Aynu soo qaadanno tusaalooyin qaar oo ku lug lahaanshaha dawladeed ee arrimaha diinta loo arkay inay dawladdu ku guul-darraysatay inay ixtiraamto sinnaanta diinta iyo ku xadgudubka mabda’a damaanad qaadka dastuurku. Waxaan rabay in aan soo qaado tusaalooyinkan sababtoo ah waxaan aaminsanahay inay sabab u ahaayeen kor u kaca mucaarado badan oo ka dhan ah dawladda iyo fikradda diinta ee masraxa siyaasadda. Machadaha diiniga ah ee dareemay khatarta ka iman karta ku lug lahaanshaha dawladda, Machadaha kale ee diinta ka baqaya kor u kaca iyo dalabaadka, maaha kuwo ka soo horjeeda dawladda laakiin si uun bay uga soo horjeedaan iyaga oo isku dayey in ay saamayn ku yeeshaan go’aannada dawladda iyaga oo u xaglinaya machadooda iyo raace sida ay u wada rumaysnaayeen inay ku haboon tahay.
Kiisaska waxaa ka mid ah ku lug lahaanshaha dowladuhu ee doorashada jagooyinka hoggaaminta machadaha diinta, gaar ahaan kan Ortodokska iyo hoggaamiyeyaasha diinta Islaamka. Waa mawqif adag oo ay qaateen taageereyaal badan oo ka tirsan labada machadyada diinta; magacaabista culimada waa siyaasad. Halgan badan oo gudaha ah ayaa ka dhashay gacmihii dawladda ee aan muuqan ee dheeraa ee soo jireenka ahaa ee ilaa hadda socda. Ku lug lahaanshaha dowladda ee arrimaha Islaamka ayaa sii socda sida ay sharraxayaan dadka halganka kula jira faragelinta dowladda. Ku dhawaad ​​bilawgii qarniga itoobiya, Dawladdu waxay gacan ku qadatay, oo ku sii fogaatay oo waxay keentay baris cusub oo ka hor imanaya barashada diinta islaamka waxayna isku dayday inay ku beddesho imaamyada iyo culimaa’udiinka afkaarta ‘Axbash’. Waxa kale oo dawladda lagu eedeeyaa in ay adeegsatay gacmo dadban oo ay ku lug yeelato arrimaha kaniisada Ortodokska iyada oo adeegsanaysa dad ka mid ah kaniisad oo u muuqda in ay ilaalinayaan danta dawladda halkii ay ka ilaalin lahaayeen kaniisadda iyo xerteeda.
Tusaale kale ayaa ah in dawladu soo saartay xeerar ku saabsan habka cibaadada ee goobaha waxbarashada oo waqtiyo kala duwan ay ku hardamayeen kooxo diimeedyo kala duwan gaar ahaan kuwa muslimiinta iyadoo inta badan xayiraadaha ay aaminsanaayeen dadka diintu ay ka soo horjeedaan caqiidada diinta Islaamka. Waxa kale oo jira xannibaado la soo qaaday oo ka soo horjeedaay xuquuqda ardayda Masiixiyiinta ah ee Ortodokska, ee mamnuucidda adeegidda cuntada xilliyada soonka sida ku cad jadwalka soonka. Arrimahaas iyo kuwo kale oo badan oo la mid ah waxa laga soo minguurin karaa taariikhdeenna iyo dhaqankeennii dhowaa, iyadoo su’aal la gelinayo ku-dhaqanka dawladnimo ee mabda’a calmaaniyadda. Sida taariikhda dhaw inoo sheegayso markii qoomiyadaha ay dareemeen khatarta khatarta ah iyo sinnaan la’aanta ay si gaar ah u qaateen oo ay isku urursadeen isirkooda si ay ula dagaalamaan cadaalad darada oo maanta keentay urur siyaasadeedka aan ku jirno, waxaan aaminsanahay in jawaabihii ugu dambeeyay iyo hab-dhaqan u muuqda in uu diinta soo gelinayo garoonkii siyaasadda ayaa si weyn loogu dhiirraday cabsida laga qabo gacmaha si aan habboonayn ee dawladuhu u fidiyaan iyo hab lagu ilaaliyo xorriyadda diinta oo ay ahayd in ay noqoto mas’uuliyadda dawladda si ay muwaadiniintu u dareemaan ammaan ka dhan ah xorriyadda. ee diinta iyo wixii kale ee xuquuqul insaanka.
Gabagabadii, jawaabtani run ahaantii maaha mid ka soo horjeeda maqaalka Mihret, laakiin waa mid ka eego dhinaca kale. Shaki kuma jiro in ay lama huraan tahay in si sax ah loo xoojiyo ku dhaqanka cilmaaniyadda. Si loo arko ku dhaqanka saxda ah ee cilmaaniyadda, waa in la gaaro ku shaqeynta mabda’a labada dhinac ba (dowladda-vs-diinta; diinta- vs-dowladda). Intaa waxaa dheer, waa mas’uuliyadda dowladaha inay ilaaliyaan cilmaaniyadda iyagoo isku xaddidaya ku lug lahaanshaha arrimaha diinta. Sida ugu wanagsan, machadyada diintu waa ka jawaabi karaan oo waxay ku heshiin karaan xakamaynta ku lug lahaanshaha arrimaha dawladda. Sida ugu daran, xitaa haddii ay jiraan isku dayo kooxaha diinta ee lagu faragelinayo dowladda, dowladdu waxay yeelan doontaa meel sare oo ay ku tiraahdo ku lug lahaanshaha diineed ee noocaas ah maya.
Sidaa darteed waxaan aaminsanahay in kor uu qaadidda calmaaniyadda ay tahay waajibka horreeya ee dowladda. Si ay dawladu sidaas u samayso, oo ay u gaadho ku dhaqanka dhabta ah ee cilmaaniyadda qoraagu waxa uu rumaysan yahay in aan loo baahnayn isbedel ku saabsan sharciga, laakiin hirgelinta dhabta ah ee mabda’a dastuuriga ah ee la aqoonsan yahay ayaa ku filan. Qaab dhismeedka cusub ee soo socda ama duugga ah ee bannaan ee u furan ka-qaybgalka diimaha ee arrimaha dawladda waa in si rasmi ah loo xidhaa. Dawladdu waa inay ka fogaato ku lug-lahaanshaha arrimaha diinta iyo ku-dhaqankooda mar haddii aanay jirin cabsi kale oo khatar iyo xad-gudub dhab ah.
*Ourji Biso waa kaaliyaha bare ka ah Jaamacadda Haramaya Kuliyadda sharciga iyo musharax LLM ee sharciga xuquuqda aadanaha ee Jaamacadda Addis Ababa.
Reply To: Cilmaaniyadda oo kor loo qaado: ayay uu tahay waajibkiisa hore?